China Thermocouple Vagadziri uye Suppliers - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Thermocouple
Thermocouples ndiyo yakajairika, iri nyore, uye inochinjika michina inoshandiswa kuyera tembiricha. Ivo vanoshandura mayuniti ekupisa kuita anoshandisika einjiniya mayuniti anoshanda semasaini ekuisa kune ma process controller uye marekodhi.
Thermocouple ine welded 'hot' junction pakati pesimbi mbiri dzakasiyana - kazhinji waya - uye referensi junction kune rimwe divi. Kudziisa iyo 'inopisa' nhanho munzvimbo yekushanda inoburitsa tembiricha inogadzira iyo Electromotive Force (EMF). Iyo EMF inoonekwa pamativi emahara ewaya dze thermocouple kwainoyerwa nekushandurwa kuita mayunitsi ekuyera kupisa. Kuburikidza nekusarudzwa kwewaya dzakakodzera dzethermocouple uye sheath components, thermocouples dzakakodzera kushandiswa mutembiricha kubva (-200 kusvika 2316) °C [-328 kusvika 4200] °F.
Pyromation inogadzira akasiyana siyana eema thermocouples uye thermocouple kutsiva kweakawanda mashandisirwo ekushambadzira, kusanganisira MgO (Magnesium oxide), maindasitiri uye general-chinangwa mhando. Isu tinoitawo magungano e thermocouple enzvimbo dzine njodzi uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoda kubatana misoro, machubhu ekudzivirira, thermowell uye / kana zvinofambisa.
Tumira meseji yako kumutengesi uyu
Thermocouple inzwa inoshandiswa kuyera tembiricha. Thermocouples ine makumbo maviri ewaya akagadzirwa nesimbi dzakasiyana. Makumbo ewaya anosungirirwa pamwe chete kune imwe mugumo, achigadzira mubatanidzwa. Uku ndiko kunopimwa tembiricha. Kana junction ikasangana nekushanduka kwekushisa, voltage inogadzirwa. Iyo voltage inogona kududzirwa uchishandisa thermocouple reference matafura kuverenga tembiricha.
Kune akawanda marudzi e thermocouples, imwe neimwe iine yayo yakasarudzika maitiro maererano netembiricha renji, mukurumari, vibration kuramba, kemikari kuramba, uye kushanda kuenderana. Type J, K, T, & E are âBase Metalâ € thermocouples, ayo akajairika marudzi e thermocouples.Type R, S, uye B thermocouples ari obNoble Metalâ € thermocouples, ayo anoshandiswa mune yakanyanya tembiricha. zvinoshandiswa (ona thermocouple tembiricha masosi ezve ruzivo).
Thermocouples anoshandiswa mune akawanda maindasitiri, sainzi, uye OEM kunyorera. Inogona kuwanikwa mune angangoita ese misika yemabhizimusi: Power Generation, Oiri / Gasi, Mishonga, BioTech, Cement, Pepa & Pulp, nezvimwewo Thermocouples anoshandiswawo mune zvemazuva ese midziyo senge zvitofu, mavira, uye toasters.
Thermocouples anowanzo kusarudzwa nekuda kwemutengo wakaderera, mazinga ekushisa akakwira, tembiricha yakakura, uye hunhu hwakasimba.
Mubvunzo: Ndinogona sei uye kwenguva yakareba sei kuti ndiwane sampuli kuti nditarise kunaka kwako?
A: Mushure mekusimbiswa kweThermocouples, unogona kuda sampuli kuti utarise mhando yedu. Zvino mushure mekunge watitumira isu yakasimbiswa
mafaera, iyo Thermocouples ichave yakagadzirira kuendeswa mumazuva manomwe. Iwo masampuli anozotumirwa kwauri kuburikidza nekutaura uye kusvika
mumazuva 5-7 ekushanda.
Mubvunzo: Maodha sei Thermocouples?
A: 1) .Tinokumbira utitaurire iyo modhi uye huwandu uye chimwe chikumbiro chaunoda.
2) .Tinokuitira iyo PI yako.
3) Mushure mekusimbisa iyo PI, tinoronga odha yako iwe mushure mekugamuchira mubhadharo wako.
4) .Mushure mekunge zvinhu zvapera, tinotumira zvinhu kwauri uye tinokuudza nhamba yekutevera.
5) .Tichazoteedzera zvinhu zvako kusvikira wagamuchira izvo zvinhu.
Mubvunzo: Ndeipi nzira yako yekutumira?
A: Isu tinotakura ne Express, nemhepo, negungwa, nechitima. Kazhinji isu takatarisa nekuenzanisa, tozopa mutengi iyo
nzira chaiyo yekutumira.
Mubvunzo: Chii nezve Thermocouples MOQ?
A: Chekutanga kuraira MOQ = 1pcs
Mubvunzo: Kana ndichida kuburitsa odha, ndeipi nzira yekubhadhara yaunogamuchira?
A: Tinogamuchira T / T, Paypal, Western mubatanidzwa, L / C, nezvimwe.
Q: Kana ini ndichida kuburitsa odha, ndeipi maitiro?
A: Thanks. Iwe unogona kutumira kubvunza kwatiri nealibaba, kana kutumira isu neemail, isu tinopindura mukati me24hrs.
Gesi Thermocouple Connector ine Plug In
Iyi thermocouple kutsiva inosungirirwa nyore kune anti-tilt yekuchengetedza mudziyo (isina kuisirwa). Kana iyo heater yakanyungudutswa kana kudonhedzwa, shanduko yekurasa inogona kudzivirira kuitika kwekubuda kwegasi kana moto ukadzimwa uye gasi richiripo, iro rakachengeteka zvakanyanya .Welcome to buy Gas Thermocouple Connector with Plug In kubva kwatiri. Chese chikumbiro chevatengi chiri kupindurwa mukati meawa makumi maviri nemana.
Read MoreTumira Inquiry
Cooktop Zvikamu Gasi Cooker Thermocouple
High standard solid solid copper and brass material, chivakwa chakasimba chekusimba uye kurarama kwenguva refu. Unogona kuzorora uine chokwadi chekutenga Cooktop Parts Gasi Cooker Thermocouple kubva kufekitori yedu uye isu tichakupa yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi uye kuendesa panguva.
Kicheni Appliance Zvikamu Thermocouple
Yakasarudzika Dhizaini yeGesi hita Kunze kwekupisa maGoridhe akafukidzwa zvinongedzo mukati. Iyo thermocouple yetrace heater zvikamu zvakagadzirwa neepamusoro-standard ndarira uye tsvuku zvinhu zvemhangura, uye ine yepamusoro-tembiricha inodzivirira. Yekuchengetedza yekurasa marara switch inogadzirwa neyakaomarara ABS zvinhu, izvo zvinogara zvakasimba.Tinogamuchirwa kutenga kicheni mudziyo wemidziyo thermocouple kubva kwatiri.
Gasi Ovheni Zvishandiso Thermocouple
Thermocoupler Kune Akawanda Brand yePropane Patio Heaters Asi ASI zvepasirese uye chete zvinokwanisa kushanda negasi yekurasa dutu.Iyo inotevera sumo kune gasi ovhoni zvishongedzo thermocouple, ndinovimba kukubatsira iwe kuti unzwisise zviri nani. Welcome vatengi zvitsva nezvitsaru kuramba kushandira pamwe nesu kuumba ramangwana rakanaka pamwe chete!
Infrared Gasi Inobika Thermocouple
Gomba remoto thermocouple universal rinoshandiswa pamoto gasi, gomba remoto, grill, chitofu, cooker cooker, patio heaters, natural gas furnace, fire sense patio heater thermocouple replacement etc.Welcome to buy infrared gas cooker thermocouple kubva kwatiri. Chese chikumbiro chevatengi chiri kupindurwa mukati meawa makumi maviri nemana
Gasi Barbecue Thermocouple yeKitchenware
Inokodzera mhando dzese dzepasi pekumanikidza hita, BBQ chitofu nemaovhoni.Inoda kusundira vharuvhu kutanga wobva wadzora chokurukisa uye wobata kwemasekondi mashoma, haigone kunamatira ipapo ingangoda 5-15SecondsPota kutirovera runhare kana uchinge uchinge uchishaya anokokwa. gasi bhengi thermocouple yekicheniware kubva kwatiri.
Aokai inyanzvi Thermocouple vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.